दशैँ भन्नेबित्तिकै चंगाको चित्र मानसपटलमा आइहाल्छ । शरद ऋतुको सफा आकाशमा चंगा उडाउन पाउँदा खुसी नहुने पनि बिरलै हुन्छन् । चंगा उडाउने यो चलन केवल मनोरञ्जन मात्र नभइ संस्कृतिकै अभिन्न अंग बनेको छ ।
इन्द्रलाई सहकालका देउता मानिन्छ । उनै देउतालाई हामीलाई यसपालि वर्षात्‌ले पुग्यो है भनेर सन्देश पठाउन चंगा उडाउनुपर्छ भन्ने लोकपरम्परा छ । त्यो सन्देश सुनेर भगवान् इन्द्रले वर्षाको मुहान रोकिदिन्छन् ।
संस्कृतिविद् डा. चुन्दा वज्राचार्य कृष्ण अष्टिमीदेखि उपत्यकामा चंगा उडाउने परम्परा रहेको बताउँछिन् । ‘भगवान् इन्द्रलाई हामीलाई वर्षात्‌को पानीले पुग्यो रोकिदेऊ भनेर चिठी पठाएको भनेर बुझ्ने गरिन्छ,’ कृष्णाष्टमीदेखि दशमीको टीकाको दिनसम्म उडाउने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘नवमीको दिन कृषिकर्ममा प्रयोग गरिने हँसियालगायत ज्यावल (हातहतियार)हरूको पूजा गरिन्छ । ज्यावलको पूजा गरिसकेपछि त्यही हतियार लिएर धान काटिन्छ ।’ असोज महिना उपत्यकामा धान पाक्ने मौसम हो । उपत्यका वरपरका स्थानीय पाकेको धानबाली काट्न थालेका छन् ।
इतिहास तथा संस्कृतिविद् पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ चंगा संस्कृतिको लिखित अभिलेख नरहेको बताउँछन् । ‘नेवार समुदायमा मौखिक इतिहास, लोकपरम्परामा आधारित चंगा संस्कृति छ,’ वैदिककालसँग यसको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्राध्यापक श्रेष्ठले भने, ‘इन्द्र भगवान् चोर थिए भनेर मनाइन्छ, इन्द्रजात्रा । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको उदय भएजस्तै सन्देश बुझ्न सकिन्छ । इन्द्रलाई सजाय दिएर जात्रा मनाएलगत्तै जनताले खुशियालीमा चंगा उडाउने गर्छन् ।’
यसो त, नेवार समुदायमा छोरीचेली बोलाउन सन्देशवाहकका रूपमा चंगा उडाउने गरेको भन्ने गर्दछन् । ‘चेलीलाई बिहे गरेर टाढा कर्मघर पठाइन्छ,’ दिनोज भन्छन्, ‘आकाशमा चंगा उडाएर मोहनी (दसैं) आउन लाग्यो । चेली तिमी माइतघर आऊ भनेर सन्देश दिने काम चंगाले गर्दछ ।’
यही लोकपरम्परा जसरी काठमाडौं उपत्यकाको खुल्ला आकाशमा चंगा उड्न थालेका हुन् ।
विश्वका केही भागमा चंगा महोत्सव हुने गरेको छ । थाइल्यान्डमा व्यावसायिक चंगा प्रतियोगिता नै गरिन्छ । भारतमा पनि चंगा उडाउने प्रतियोगिता नै भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न स्थानमा चंगा चेट प्रतियोगिता हुँदै आएका छन्।
भगवान रामले उडाएका थिए चंगा
संसारको पहिलो चंगा तीन हजार वर्ष पहिले पातहरुबाट बनाइएको बताइन्छ । प्रामाणिक रुपमा चाहिँ चंगाको इतिहास दुइ हजार वर्ष पुरानो छ । चंगा कसले बनायो, कहिले बनायो, त्यसबारेमा कुनै इतिहास छैन । कालान्तरमा चंगाको खोजी इशापूर्व तेश्रो शताब्दीमा भयो ।
सबैभन्दा पहिला चंगाको आविष्कार चीनमा भएको मानिन्छ । किंवदन्ती अनुसार दुइ हजार वर्षपहिले एकजना चिनियाँ किसान खेतमा काम गर्दै थिए । हावा बेस्सरी चलेछ ।
किसानले आफ्नो टोपी हावाले उडाउला भनेर धागोले बाँधेर राखे । टोपी मजाले हावामा उड्यो । त्यसपछि नै चंगाको आविष्कार भएको भन्ने चिनियाँ किंवदन्ती छ । कालान्तरमा शैन्य अभियान, हावाको बहाव र सन्देश पठाउन चंगाको उपयोग हुन थाल्यो ।
चंगाको रोचक सन्दर्भ के पनि छ भने, एक जना जर्मनी नागरिकले ११ हजार २ सय ८४ वटा चंगा एउटै धागोबाट उडाएर रेकर्डसमेत राखेका छन् । संसारको सबैभन्दा ठूलो चंगाको आकार ६३० मिटरको छ । पूर्वीय सभ्यतामा चाहिँ चंगाको सन्दर्भ चीनको भन्दा पुरानो छ ।
तुलसीदासकृत रामायणका अनुसार भगवान रामले बाल्यकालमा भाइहरु र हनुमानका साथ चंगा उडाएका थिए । पम्पापुरमा हनुमानलाई बोलाइएको थियो, त्यसबेला हनुमान बालक रुपमा थिए । हनुमान आउँदा मकर संक्रान्तिको पर्व मनाइदैथियो । रामले भाइ र मित्रहरुका साथ चंगा उडाउन थाले ।
चंगा उड्दै उड्दै देवलोकसम्म पुग्यो । त्यो चंगा देखेपछि इन्द्रका पुत्र जयन्तकी पत्नी आकर्षित भइन् । उनले चंगा उडाउनेका बारेमा सोच्न थालिन् । उनलाई लाग्यो, चंगा उडाउने मान्छे पक्कै चंगा लिन आउनेछ । प्रतिक्षा गर्न थालिन् र उडिरहेको चंगा च्याप्प समातिन् ।
धर्तीमा चंगा उडाइरहेका राम र हुनमानले त्यो चंगा देखेनन् । रामले बालक हनुमानलाई चंगा पत्ता लगाउन आग्रह गरे । हनुमान त पवन पुत्र, उड्दै इन्द्रलोक पुगे । उनले कसैले चंगा समातिरहेको देख ।
‘यो त हाम्रो चंगा हो, देउ’, हनुमानले भने ।
जयन्तकी पत्नीले सोधिन्, ‘यो कसको चंगा हो ?’
हनुमानले रामको चंगा भएको बताएपछि जयन्तकी पत्नीले रामको दर्शन गर्ने अभिलाशा राखिन् ।
हनुमानले फर्केर रामलाई त्यो कुरा बताए । रामले हनुमानलाई पठाएर सन्देश दिए, ‘अवश्य, चित्रकुटमा म तिमीलाई दर्शन दिनेछु ।’ हनुमानले रामको सन्देश जयन्तकी पत्नीलाई सुनाइदिए । जयन्तकी स्त्रीले चंगा छाडिदिइन् । र चित्रकुटमा उनले एक दिन रामको दर्शन पनि पाइन् ।
कुनै समय चंगा भनेपछि केटाकेटीको मन फुरुङ हुन्थ्यो, तर अहिले केटाकेटीको मन युट्यूब, मोबाइल एप्स र मोबाइलमा राखिने अनेकथरि गेमले तानेको छ । पहिलेपहिले हावामा माथिमाथि चंगा उड्दा दसैँ आयो भन्ने थाहा हुन्थ्यो ! तर अहिले दसैँ लाग्दा समेत चंगा आकाशमा कम देखिँदैछ । दसैँमा चंगा चेटको रमाइलो बेग्लै हुन्थ्यो । दसैँमा एकपटक चंगा त उडाउनै पर्छ भन्ने मान्यता पनि थियो । तर अहिले दसैँमा चंगा उडाउनुपर्छ भन्ने प्रचलन विस्तारै मोबाइलका गेमहरुले खाइदिएको छ ।